अक्षर स्पर्श: त्यो पापी
तर के गर्नु नियतिको खेल यो । बुझ्नै नसकिने रहेछ । आज ऊ बहुलाएकी ले सबैको हाँसोको पात्र भएकी छ । अचानक देखा परेकी यो केटी कहाँबाट आइ कसैले थाहा पाउन सकेका छैनन् । हिजो आज उसको क्रियाकलापहरुमा अलि भिन्नता देख्दै छु म । अलि सुस्त देखिन्छे फ। त्यत्ति सडकमा डुलेको पनि देख्दिन । पेट पनि डम्म फुलेको छ र ऊ दुब्लाएकी छ । बिरामी जस्ती देखिन्छ हेर्दा पनि । "चिसोले पो हो कि ? नत्र के नै भयो होला र यसरि पेट बढ्दै जाने र ऊ दुब्लाउदै जाने" । गहिरो नज़र लगाएर हेर्दै मैले यस्तै कुराहरु सोच्दै थिए । मेरो छेउ बाटै आवाज आउछ " ती बौलाही केटीलाई पनि छोडेनन । कसले कहिले बलात्कार गरको हो खै । अहिले ऊ सात महिना कि गर्वावती पो छे " दुइ महिलाहरु मेरै छेउबाट यस्तै कुरा गर्दै अगाडी बढे । मेरा कानहरुमा यी शब्दहरु कुनै क्षेप्रास्त्र भन्दा कम थिएनन् । उफ्फ्फ़ को होला त्यो पापी ? कस्तो निर्दयी राक्षस होला । पक्कै मानवको रूपमा कुनै जनवार नै हुनु पर्छ त्यो । म नै पागल हुन्छु जस्तो लग्यो यो सुनेर । उसलाई एक नज़रले हेरी कुनै पागल झैँ नै घर तिर दौडे म ।
कुछ ख्वाहिशों के दावेदार हम भी हैं
कुछ ख्वाहिशों के दावेदार हम भी हैं वो चरागर हैं तो बिमार हम भी हैं । संम्भालते किसे तामाशाई बने है जो भरि हैं महेफ़ील लाचार हम भी हैं । ...